ကြင်းသဒေါင် ပယင်းရောင် news | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကြင်းသဒေါင် ပယင်းရောင် news
ကြင်းသဒေါင် ပယင်းရောင် news
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 5, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 8 comments
သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန်က မှန်ကန်သောနည်းဖြင့် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံမှုများ ပြုမည်ဟု ကြေငြာလိုက်သည့်အတွှက် တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေဂါ မှတ်ပုံတင်အသစ်လုပ် နာမည်ပြောင်းရန် လူဝံမှုကြီးကျက်ရေး အရာရှိ ဦးငှက်ကြီးအား ငွေသိန်းတရာ ပေးထားဂျောင်း သတင်းထွက်ပေါ်နေသည်။
လုအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရန် မြန်တျန့်ငရဲအဖွဲ့အား သင်တန်းပေးရဂျောင်း ဥရောပသမဂ္ဂ ပေါကျားချက်အပေါ် ဝတပ်မဟာ နိုင်ငံရေးမှူး တရုတ်ကူမြူနစ် အီတွန့်ဗွမ်မှ လုတမျိုး ဝတမျိုး မလုပ်သင့်ဂျောင်း တရုတ်ပြည်လုပ် အေကေ၄၇ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကိုင်လျက် ဒေါသတဂျီး ပြစ်တင်လိုက်သည်။
ဆီးဂိမ်းပွဲအမှီ နေပူဒေါ်တွင် ဟိုတယ်၁၁လုံး နှစ်ရက်အတွင်း ဖွင့်လှစ်လိုက်ရာ နိုင်ငံဒဂါ ပြိုင်ပွဲဝင်များ၊ ရွှေပဲလာ ဧည့်ပိတ်သက်များ၊ ဝါတနှာရှင်များနှင့် ကြက်ပြန်မရ စည်ကားတော့မည်ဟု ISO လက်မှတ်ရ ဇိမ်ဂေါင်း မိုက်ခဲ ဂျော်နီအောင်ပု မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။
ယူကရိန်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် အစိုးရမှ အင်အားသုံး နှိမ်နှင်းခဲ့မှုအပေါ် ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သော နေတိုးအား ယူကရိန်း သမတ ယူရီဂါးဂါးရှီးမှ နင်သာ ဟိုမင်းသမီးတွေလို ဆေးမရှုနဲ့ ဟုရင့်သီးစွာ ခွန်းတုံ့ပြန်သည်။
ကူမြူနစ်ပါတီ အဆင့်မြင့် ပုပ်ကိုယ်များ အပါအဝင် အစိုးရအရာရှိ ၂၀၀၀၀ကျော်အား တရုတ်ပြည်တွင် ခြစားမှု၊ အကျင့်ပျက်မှုတို့ဖြင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်ရာ မြန်တျန့်ပြည်တွင် တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ အရေခြုံ၍ ဂုတ်သေးစုတ် အမြတ်ထုတ် စီးပွားလုပ်ရင်း လမ်ဗော်ဂီနီ ပြိုင်ကားဆယ်စင်း ဥထားသူ ငါ့ဘို့သမား ကြေးမုံဂျီး အီတွန့်ဗွမ် မဗွမ် စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
သထိန်းဂျီးမောင်ဝိတ် မူးယစ်ဆေး အရှုပ်တော်ပုံတွင် ပက်သက်သူ အနုပိန်ညှောင်ရှင်များမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျူးလွန်သူများဖြစ်၍ အရေးယူမှု မပြုဂဲ့ဂျောင်း မူးယစ်အထူးတပ်ဖွဲ့ ဒုတ်ရဲမူးဂျီး ချဉ်ပေါင်သီး ပေါကျားဂဲ့အပြီး ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးအဖြစ် ဒေါ်လာသန်းတထောင်ဖိုး ဘိန်းကုန်ကူးရန် တချီထဲနှင့်အပွကြံ ကုမ္မဏီမှ အစု ရှယ်ယာများ ခေါ်ယူလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ကုမ္မဏီပိုင်ရှင်မှာ “ကြောင်ပြာသို ယောင်လာမှို” “လျှာဂျီးကို အစော်ကားနဲ့” ရင်သိမ့်တုန် အပြာရောင် အခြစ်ဇာတ်ကားများဖြင့် တဟုန်ထိုး နာမည်ကြီးလာသူ စက်ဆီမင်းသား အောင်ကြူးဖြစ်ပြီး ရှယ်ယာရှင်များမှာ အမြီးကျက် အမြီးစား ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား၊ ဖြတ်စားလတ်စား၊ အမြတ်ကြီးစား၊ အခွန်ရှောင် ချမ်းသာလာသူ မြန်တျန့်ဂဇက်အဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြောင်း မိုးဇေငြိမ်းဖေ့စ်ဘွတ်တွင် လက်ထောက်ချသည်။
ကြောင်ပြာသို အခြစ်မူဗွီမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းတကွက်
ဒီအစိုးမရရဲ့ ဘိန်းစား ဥပဒေက အလကားပါဗျာ…
သူတို့ပက်သက်နေသူချင်းကြတော့ တမျိုး၊ တောက်ညင်ကပ်ရင် တမျိုး…
ဟိုမင်းသားကြတော့ NLD နဲ့သွားပက်သက်လို့ ဂန်ဂျာမှုနဲ့ စေ့လိုက်တယ်…
နဲရင်ဖမ်းတယ်၊ များရင် ဝါးတီးပေးပြီး လွှတ်ပေးတယ်… ဟီး ဟီး
ဘူမှ ဘာမှ ပြောကြနဲ့ တော့…..
သုံးစွဲမှုဘက်ရော ပေါက်ကြားမှု တွက်ရော….
အကုန် ခွေးလွှတ်တယ် …….
ရဲတိုက် လေးကို ပြန် လွှတ် ပေးးး ကြ ဘာာာာာာာာာ
နဲရင်ဖမ်းတယ်၊ များရင် ဝါးတီးပေးပြီး လွှတ်ပေးတယ်…
ဟားဟား မှန်လိုက်လေ ဦးကျောက် ရာ
သဒင်းကြက် အလင်းဆက် လာမယ် ထင်နေတာ
ကပုအလုပ်က ISO လက်မှတ်ရထားတာဂိုးးးးးးးးးးးးးးးး
ဟုတ် လိုက် လေ ကိုသိန်းဇော် ရေ။
ကြောင် ပြား ကြီးဆိုတာ။
“အီတွန့်ဗွမ် မဗွမ်” ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့ တက်ကိုတုန်းကသူငယ်ချင်းယောကျာ်းလေးတွေတအားပြောတာသတိရတယ်။
အာ့ဘာကိုပြောတာလဲ သေချာနားမလည်ပေမယ့် လိုက်သုံးနှုန်းမိခဲ့တယ်။